Wararka - Nooca Gawaarida Gawaarida ee cusub ee Wanda ayaa guul leh
Nooca Gawaarida Gawaarida ee cusub ee Wanda ayaa guul leh
Xuzhou Wiyo wada dhalaal ah,sida aqoonsiga qaranka ee shirkadaha farsamada sare, waxay sii wadi doontaa inay garabka saarto hadafka sayniska iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda, waxayna sii xoojineysaa horumarka shirkadda hal-abuurnimada madax-bannaan, habka horumarinta wax soo saarka cusub, si loo daboolo baahida macaamiisha ee xawaaraha sare, Waaxda R&D waxay soo saartey qalab cusub oo loogu talagalay gudbinta qalabka wareejinta gawaarida GE314-6.15-25
Si loo naqshadeeyo sheygan, waxaan tixraaceynaa cabirka kuwa jira gawraca wadid SE12-78-H-25R, oo go'aamiya qaybaha loo baahan yahay iyo cabirka u dhigma adoo tixraacaya macluumaadka ku habboon iyo iyada oo loo marayo xisaabinta taxane ah. Nidaamka naqshadeynta waxaan ku qaadnay qaabka 3D dhammaan qalabka, waxaanna ku qaadnay dhammaan shirkii . Intii lagu guda jiray howsha wax soo saar ee qeybaha kala duwan, dhammaan waaxyaha shirkadda waxay si firfircoon ula shaqeynayeen midba midka kale. Ugu dambeyntiina, iyada oo loo marayo dadaallada wadajirka ah ee dhammaan waaxyaha, soosaarka wax soo saarka cusub ayaa si guul leh ku dhammaaday, baaritaanka wax soo saarka badeecaddu wuu fiicnaa, shuruudaha naqshaddana waa la buuxiyay.
Taxanaha GE gawraca wadid wuxuu ka kooban yahay guryo ku lifaaqan, dhalista gawraca, usheeda dhexe pinion iyo qaybo taageeraya. Waxay si toos ah u isticmaali kartaa mootada ama matoorrada korontada ku shaqeeya sida isha laga helo awoodda. Way fududahay in la rakibo oo la isticmaalo, isla markaana la ogaan karo wareegga saacadda iyo dhinaca kale. Ka qayb qaadashada habka gudbinta qalabka, wuxuu leeyahay astaamaha qaab dhismeedka is haysta, saamiga gudbinta joogtada ah, waxtarka gudbinta sare, nolosha adeegga dheer;dhalista gawraca maaddaama ay tahay qaybta ugu weyn, waxay u adkeysan kartaa daqiiqad rogaalcelis ballaaran iyo xoog axial / radial ah.Adopts salka nooca xayndaabka, waxaa lagu dabakhi karaa shuruudaha isticmaalka looga baahan yahay waa munaasabad aad u sarreysa, waxay leedahay boodh cayiman, awood aan biyuhu lahayn.